राज्य (state) को आफ्नो धर्म हुँदैन भनेको साईकल को पखेटा हुँदैन भनेको। भनेको चरा जति सबै लाई समात, समातेर पखेटा काट भनेको होइन। राज्य (state) को आफ्नो धर्म हुँदैन भनेको बाहुन हरु लाई समात, समातेर टुपी काट भनेको होइन। बाहुन ले इच्छा लागे जति टुपी पालने, टुपी बाक्लो पार्ने, टुपी कस्ने, टुपी ठाडो पार्ने।
नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुने कुरा, त्यो सकियो। कुनै दिन नेपालमा प्रति व्यक्ति आय २००० डॉलर पनि हुन जाला।
नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुनु नेपालमा रहेका ५०% हिन्दु का लागि पनि राम्रो हो। नेपाल बुद्धिस्ट राज्य घोषणा भै दियो भने? नेपाल मुस्लिम राज्य घोषणा भै दियो भने? नेपाल क्रिश्चियन भै दियो भने? नेपालमा ISIS पस्यो भने के हुन्छ हाल? त्यसै ले नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य भएको ले नेपालका ५०% हिन्दु ढुक्क हुने। नेपालमा ISIS पसेन भनेर ढुक्क हुने।
नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भनेर बीजेपी ले अथवा मोदी ले भनेको छैन, भन्ने कुरा आउँदैन। एउटा को बीजेपी को उद्दंड मान्छे ले नेपालमा आएर भन्दिएछ, नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्छ। बीजेपी ले आधिकारिक बिज्ञप्ति नै निकाल्नु परेको: "त्यो हाम्रो पार्टी को आधिकारिक लाइन होइन।" भारत खुद धर्म निरपेक्ष राज्य हो। संसारका विकसित जति देश सब धर्म निरपेक्ष छन। संसारका विकसित जति देश अधिकांश संघीय पनि छन। तर त्यो फरक टॉपिक पर्यो।
नेपाल हिन्दु राष्ट्र नै हुनुपर्छ जसले भन्छ उसले नेपाल को ५०% गैर हिन्दु लाई नस्वीकारेको नै हो। यो अधिकारको कुरा हो। बामे ले मैले सीके राउत को वाक स्वतंत्रता स्वीकारदिन भनेर हुन्छ? अधिकार मान्छे ले जन्मँदै आफु संग लिएर आएको हुन्छ। स्वीकारने नस्वीकारने हामी को?
‘एन्टी स्नेक भेनम’ को अभाव हुन नदेऊ
सभासद् नै भन्छन्, ‘नेताको निरीह दास भइयो’
बाबुरामले अब नयाँ पार्टी किन नबनाउने?
हिमालय होटलको भेलाले गरेको संकेत
एमाओवादीका नेता डा. बाबुराम भटराईलाई सधैँ अरुभन्दा फरक देखिन मन लाग्छ । ..... अडानका सन्दर्भमा एमालेको कुरै नगर्दा राम्रो हुन्छ । उपयुक्त एजेन्डा उठाउने र अनुपयुक्त रुपले छोड्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आफ्नै घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डालाई कसैले नउठाइदिए हुन्थ्यो भनेर उसले छिटोछिटो छोड्यो । ...... एमाओवादीभित्र बसेर यति धेरै दुःख उठाउनुभन्दा बाबुरामले नयाँ पार्टी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । एमाओवादीले अघि सारेका कतिपय मान्यतासँग उहाँका विचार मेल खाँदैनन् ...... हाराहारीमा रहेका कम्युनिस्टहरुलाई जिल्याउँदै कांग्रेसले नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदामा वीपी कोइरालाको नाम उल्लेख गर्नेबाहेक सम्पूर्ण रुपमा आफ्ना एजेन्डा हुलिसकेपछि अहिले बाबुराम भट्टराईहरुले महंगा होटलमा हैसियतबिनाका बुद्धिजीवी बोलाएर पानीमाथिको ओभानो हुन मिल्छ ? ...... बाबुराम भट्टराई स्वयम् राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति हुनुहुन्छ । अहिलेको हिजडा शासकीय स्वरुप उहाँकै समितिबाट बैधानिक रुपमा पारित भएर अघि बढेको हो । त्यहाँ निर्णायक धक्का दिन नसक्ने, चारदलबीच १६ बुँदे सहमति हुँदा सहमति बनाउन नसक्ने अनि हिमालय होटलमा लोकराज बरालहरुलाई साक्षी राखेर ती विषय संविधानमा समावेश हुन्छन् ? ........ पार्टीभित्र सहमति नहुँदा नहुँदै, दाहालले नचाहँदा नचाहँदै पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनमा पनि उहाँले यस्तै बजारिया सहयोग लिनुभएको थियो । अहिले पनि यस्तो जमघट देख्दा उहाँमाथि केही संकट आइपरेछ कि भनेर बुझ्नुपर्छ । ....... बाबुराम भट्टराईमा एमाओवादीको मुख्य नेतृत्वमा कसरी आउने भन्ने ठूलो चिन्ता छ । भारतमा अरविन्द केजरीवालको चर्चा चुलिएका बेला उहाँले पनि नेपालमा नयाँ शक्तिको छाटा ओढ्न थाल्नुभएको थियो । उहाँको मुख्य रुचि बुझेर पुष्पमकल दाहालले पार्टी नेतृत्वको उधारो आश्वासन दिएपछि भूकम्प नआउँदै त्यो बहस एकाएक गायव भएको थियो र उहाँ दाहालको प्रशंसामा जुट्नुभएको थियो । ....... पार्टीभित्रबाट निर्वाचन जितेर आफ्नो बलमा कुनै पनि हालतमा नेतृत्वमा पुग्दिँन भन्ने थाहा पाउनुभएका उहाँका लागि त्यसयताको समय त्यति पि्रय भएन । किनभने, दाहालले भनेजसरी पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । त्यसबाट बाबुराममा फेरि छटपटि सुरु भएको छ । ....... एमाओवादीभित्र बसेर यति धेरै दुःख उठाउनुभन्दा बाबुराम भटराईले नयाँ पार्टी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । एमाओवादीले अघि सारेका कतिपय मान्यतासँग उहाँका विचार मेल खाँदैनन् । मार्क्सवादको व्याख्यामै पनि उहाँ धेरै पर पुगेको देखिन्छ । यस्तो बेलामा त्यही पार्टीमा बसेर सिँगौरी खेल्दा न त्यो पार्टी उँभो लाग्छ, न त उहाँ नै । बरु, आफ्नो विचार, संगठन र नेतृत्वलाई संयोजन गरेर उहाँ जस्तो नेताले नयाँ पार्टी गठन गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । ..... सर्वत्र निराशा फैलिएको बेला कागताली परेर कहिलेकाहीँ त्यस्तो पार्टी विकल्प पनि बन्न सक्छ । एकपटक बाबुराम भटराईले त्यो प्रयोग किन नगर्ने ?
Labels: bahun brahmin buddhist christian Constituent assembly constitution draft constitution hindu muslim Nepal secularism